Baadh Talooyin iyo tabaha in Wondershare Resource Section r
Bareesada-tago hubiyo in faylka browser ku salaysan aan loo soo ciyaaray oo kaliya laakiin user sidoo kale helo natiijada ugu fiican ee arrintan la xiriira, marka ay timaado in ciyaaryahanka windows media files ku salaysan oo kordhin la sameeyo. Read More >>
Windows media player aan shaqayn Maxaa la sameeyaa
In this xaaladaha sare tutorial internet-ka ayaa loo doortay si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah maaraynta geedi socodka tahay marka ay timaado arrimaha windows media player iyo dib u Read More >>
Xalin Windows Media Player ma ciyaari karo MP3
gobolka qaab ciyaareed tahay mp3 iyo tutorial ku saabsan yahay qaab mp3 iyo khilaaf windows media player ah. Read More >>
10 Su'aalaha ku windows media player 12
Waxaa jira tobanaan kun oo Casharrada in la qoray si loo hubiyo in arrinta iyo dhibaatooyin la xiriira ciyaaryahanka windows media 12 aan la xalin kaliya laakiin user sidoo kale Read More >>
4 Talooyin ku saabsan subtitles in Windows Media Player
Sida loo shid / off subtitles ah, Sida loo dar subtitles in Windows Media Player, Windows Media Player ma noqon doonaa subtitles, Show qoraalka ama subtitles in hage rasmi ah Windows Media Player. Read More >>
3 siyaabood oo aad ku ciyaari MP4 daaqadaha media player part 2
Tutorial waxaa loo qoray si ay u hubiyaan in user ay wajahayaan arrimaha ku ciyaaro files mp4 ciyaaryahan warbaahinta aan wada cafiyo oo keliya, laakiin sidoo kale arrinta la xalin si aad u hubiso. Read More >>
Artical wuxuu kuu sheegayaa 3 talooyin ku saabsan Windows Media Player shortcuts.How in la beddelo tuuryo Windows Media Player iyo Sida loo isticmaalo tuuryo windows media player markii la yareeyo. Read More >>
Helitaanka sawiro ka iCloud waa iska sahlan, oo waxaa jira qaar ka mid ah siyaabaha ay u sameeyaan isla. Maqaalkani waxa uu ku tusaysaa sida si ay u helaan sawiro ka iCloud afar siyaabood oo fudud. Read More >>
Dhammaan adeegyada geeyo music heli karo maanta, Spotify waa mid ka mid ah in uu helo si aad u. Sidaas badan si ay u noqotaa caado Diintiinii marka aad bilaabeyso isticmaalkeeda. Iyo, sababta ma aha in ay u Read More >>
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka muuqaalada fanka ee Windows Media ee Player in aad gelisaan karaa nooc kasta oo file in user u baahan yahay iyo sabab la mid ah waxaa lagu tiriyaa sida ugu fiican oo aad More Read >>
Windows media player waa mid ka mid ah barnaamijyada kuwa hubiyaa in user helo shaqeynta la mid ah iyo sidoo kale warbaahinta guud ciyaaro waayo-aragnimo waa style iyo fasalka. Read More >>
Artical Tani waxay noo sheegaysaa inay jiraan 2 siyaabaha aad ku ciyaari DVD la Windows Media Player.Power DVD iyo Wondershare Video Convertor Ultimate. Read More >>
Read adeegyada soo socda oo waxaad ogaan doonaa kulan looga cabsado android aad u baahan tahay in try.It ka kooban yihiin 2 qayb:. Xor ah oo ay bixisay Read More >>
Dooxeen loola jeedaa dayanayaan audio file ama video ka qalab lagu kaydiyo sida disk adag ama ilo kale oo la mid ah codsi ama database online ah. Read More >>